Sideen GIF ugu samayn karaa Instagram | Hal-abuurka khadka tooska ah
Iris Gamen | 28/03/2022 21:30 | Tricks
Hadii aad xiisaynayso sida loo sameeyo gifs ee instagramIs deji, waxaad joogtaa meeshii saxda ahayd. Maqaalkan, waxaan si qoto dheer u dhex galnay aduunka GIF-yada.
gifs waa a Qalab ku habboon oo lagu daro sheekooyinkaaga Instagram; waa funny, waxay soo jiitaan dareenka taageerayaashayada, ilaa heer ay naga helaan inaan is dhex galno iyada oo ay ugu wacan tahay nuxurkaas.
El walaxda lagama maarmaanka ah marka la abuurayo gifs shabakadan bulshada, waa hal-abuur. Animations-yadani waxay noqdeen mid ka mid ah agabka ugu badan ee la isticmaalo marka la tafatiro sheekooyinkayaga gaarka ah, sidaa darteed maaha wax aan caadi ahayn inaad la yaabto sida GIFS loogu sameeyo Instagram.
1 Waa maxay GIF?
2 Qodobbo wanaagsan oo GIF ah
3 Sida GIF loogu sameeyo Instagram
4 Apps si loogu sameeyo GIFs Instagram-ka
5 Sida loo soo geliyo GIF-gayga Instagram?
Waa maxay GIF?
Gif-yadu waxay ahaayeen noqda tartanka memes, xitaa noqda beddelkooda. Laakiin way yar yihiin kuwa si dhab ah u yaqaan macnahooda iyo sida loo fuliyo.
Gif waa soo gaabinta Qaabka Isweydaarsiga Garaafyada. Si aan dhammaanteen u fahanno, waa a set of frames, kuwaas oo marka lagu ciyaaro loop, abuuro animation. Muddada animation-kan yar waa inta u dhaxaysa 5 iyo 10 ilbiriqsi.
Qodobbo wanaagsan oo GIF ah
Muhiim ma aha oo kaliya in la ogaado waxa GIF yahay, sidoo kale waa inaad ogaataa waxa ay yihiin qodobbada togan ee samaynta animations yar.
Qodobka ugu horreeya ee togan waa in Qaab GIF, wuu ka fudud yahay qaababka kaydinta fiidiyowga. GIF-yadu waxay ka kooban yihiin sawirro, markaa tani waxay ka caawinaysaa miisaanku inuu ka yaraado kan fiidiyowga.
In ay fudud yihiin, waxay noo horseedaysaa faa'iidada soo socota, taasina waa taas waxaa lagu dari karaa dhufto ee kala duwan. Kaliya uma adeegsan karno shabakadaha bulshada, laakiin sidoo kale daabacaadyadan oo kale, boggaga internetka ee gaarka ah, iwm.
Markaad la macaamilayso sawirada noole, ka caawi in daawadayaasha dareenka degdega ah loo helo marka loo eego sawirada caadiga ah. Haddii GIF uu kugu qoslo, waxaa laga yaabaa inay ku dhegto xusuustaada.
Xaqiiqda ah inay yihiin kuwo qosol leh, waxay sababaan a dareenka dareenka, taas oo ah, GIF-yadu waxay naga dhigi karaan qosol, kicin oo xitaa kicin hal-abuurkeenna oo aan rabno inaan abuurno annaga.
Iyo ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, the GIF-yadu waxay geli karaan fayras, arrin daqiiqado ah gudaheed. Waa faylal miisaankoodu yar yahay, taasna way ku mahadsan tahay, faafintoodu waa mid aad u fudud, labadaba Instagram iyo shabakadaha kale.
Sida GIF loogu sameeyo Instagram
Waxaa jira codsiyo kala duwan ama bogag shabakad ah oo noo ogolaanaya inaan ka abuurno GIF-kayaga xoqan, laakiin dhammaantood waxay wadaagaan afar tillaabo, ka hor inta aan la siin nolol.
Waxa ugu horreeya ee la leeyahay waa sawirada la soo dejiyey, sawirada samayn doona GIF-keena. Haddii aadan rabin inuu noqdo sawirro, laakiin muuqaal ah, waa inaad URL-ka kaydisaa.
Marka la diyaariyo sawirada ama muuqaalka, waa inaad ku dheji goobta aad la shaqaynayso. Qodobka soo socda waxaan ku siineynaa dhowr si aad u ogaato.
Markaad ku shubtay sawirada, tallaabada xigta waa dooro xawaaraha dib-u-ciyaarista animation, wakhtiga muddada, iyo barta aad ka bilaabayso.
Iyo ugu dambeyntii, codsiga wuxuu ku tusi doonaa horudhac sida GIF u egyahay, haddii aadan ku qanacsanayn waxaad wax ka beddeli kartaa iyada oo loo marayo settings-ka, oo marka aad dhameysato soo dejiso.
Apps si loogu sameeyo GIFs Instagram-ka
Waa mid ka mid ah Codsiyada ugu caansan ee lagu sameeyo GIF-yada shabakadaha bulshada. Ma aha oo kaliya inaad haysato suurtogalnimada inaad adigu abuurto, laakiin waxaad sidoo kale ka heli kartaa noocyo badan oo GIF ah oo aad soo dejiso.
Mid ka mid ah qodobada xun waa in marka Samee oo soo deji GIF wuxuu u muuqdaa calaamad-biyood, marka lagu daro xaqiiqda ah in faylka la soo dejiyay laga yaabo inuu yara cuslaado sababtoo ah xallinta sare.
In kasta oo ay leedahay bartaas xun, haddana waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee GIF-yada loogu sameeyo Instagram, marka lagu daro waxaad awood u leedahay inaad si toos ah ugu dhejiso shabakadaha.
Aad ula mid ah madal hore, aad leedahay suurtogalnimada in la xakameeyo xawaaraha dib-u-ciyaarista, marka lagu daro awood u yeelashada isku dhafka GIF-yada kala duwan. Qodob wanaagsan oo GifMaker ah ayaa ah inay kuu ogolaato inaad ku darto muusikada animations-kaaga, wax aan dhamaantood kuu ogolayn.
Mid kale oo ka mid ah codsiyada aadka loo isticmaalo si loo abuuro GIF-yada tayada sare leh ee xoqan, iyadoo la kaashanayo qalab horumarsan. GifGuru waxay noo ogolaanaysaa inaan u badalno muuqaalada ama sawirada aan jecelnahay GIFs, si aad u fudud.
Waxaan ka samayn karnaa meel eber, kaliya duubista interface-ka kamarada ama sixiddooda isla markiiba. Abkan waxa uu bixiyaa habayn xawaare ku socda, ku dar qoraalo ama dhejisyo, iyo filtarrada kala duwan.
Waxaan mar kale ka hadlaynaa, oo ku saabsan shabakad bilaash ah oo aad si dhakhso ah oo fudud u samayn karto GIF-yada. Waa madal aan loo baahnayn in la isticmaalo isticmaale, iyo taas Waxaad heli doontaa qalab aad u yar, kuwaas oo laga yaabo inay kugu qaadato wakhti inaad ku shaqeyso.
GIFPAL, ayaa qirtay a si toos ah u soo dejiso hal-abuurka oo ku dheji shabakadaha bulshada dhib la'aan.
Waxaa jira goobo ama codsiyo badan oo aad ku abuuri karto GIF-gaaga gaarka ah, daabacaadan waxaan kuugu dhaafnay afarta ugu isticmaalka badan ilaa hadda.
Sida loo soo geliyo GIF-gayga Instagram?
Haddii aan hore u dhammeeyey animation-kayaga, habka ku xiga waa in aan ku dhejino shabakadayada bulshada. The Qalabka Giphy, oo aan ka hadalnay, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku dhejiso Instagram dhib la'aan.
Waxa ugu horreeya waa inaan ku dhejin karnaa goobta la sheegay. The GIF waa ka fiican, haddii ay leedahay asal hufan, maadaama ay tahay qaabka kaliya ee Instagram uu aqbalo.
Mar haddaan soo galnay madasha. ku dar ereyada muhiimka ah, si waqtiga raadinta ay u muuqato isbeddellada.
Talaabada xigtana waxay noqon doontaa ka xaqiiji akoonkaaga Giphy Tan waxaad u baahan tahay inaad sameyso farshaxan ahaan. Marka xigta, buuxi macluumaadka la codsaday oo sug inta codsigaaga la aqbalayo.
Qodob muhiim ah oo maskaxda lagu hayo ayaa ah inaad waajib ku tahay soo geli macluumaadkaaga, ma koobi karay kartid animations kale.
Oo waxaas oo dhan waxaad mar horeba ka heli kartaa animation-kaaga yar ee Instagram. Xusuusnow taas waa inaad noqotaa mid hal abuur leh oo asal ah Markaad abuureyso GIF-gaaga, kaas oo aan hubno inaad ku guuleysan doonto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tricks » Sideen ugu samayn karaa GIF Instagram-ka